 ဆက်သွယ်ရန် မြန်မာဘာသာဌာနအကြောင်း
ပင်မစာမျက်နှာမင်္ဂလာ မဂ္ဂဇင်း ပါဝင်ဆင်နွှဲ သောတရှင်တို့ပွဲဘလော့ခ်တရုတ်နှင့်အာဆီယံတရုတ်ယဉ်ကျေးမှု
(GMT+08:00) 2011-08-29 12:45:36
ကျွန်တော့နာမည်ကိုလင်းကြည်ပါခင်ဗျာ၊ အမြဲစိတ်ကြည်လန်းဆန်းနေတတ်လို့၊ ကျွန် တော့ကိုလင်းကြည်လို့ခေါ်ကြတာပါဗျာ၊ ကျွန်တော့ရဲ့တရုတ်နာမည်ကလင်းချစ်
လေ၊ အသံ ထွက်နည်းနည်းတူတယ်နော်။ ကျွန်တော့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်မြန်မာစာ နဲ့ရေစက်ပါလို့လားမသိ၊ အထက်တန်းကျောင်းအောင်ပြီးနောက်၊ ပီကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာစာကိုအဓိကယူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့
မြန်မာစာကိုသင်ဖို့၊ အရင်ကစိတ်မကူးခဲ့မိပါဘူးဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ဘွဲ့ရပြီးနောက်၊ စီအာအိုင်မြန်မာ
ဘာသာဌာနမှာ အလုပ်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုဆိုရင်၊လုပ်သက်သက်တမ်းဟာ ခြောက်နှစ်တောင်
ကျော် သွားပြီလေ။ ဒီခြောက်နှစ်တာကာလာအတွင်းမှာ၊ ကျွန်တော်ဟာ သတင်းများကို ဘာသာ
ပြန်ပြီး အသံလွှင့်ရုံသာမကပဲ၊ အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာလည်း၊ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ ခရီးစဉ်ကဏ္ဍကို တက်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကတော့၊ တရုတ်ပြည် တစ်ပြည်လုံးက၊နာမည် ကျော်ကြား တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကို အဓိကထားပြီး၊ သောတရှင်များအတွက် မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်
ပေါ့ဗျာ။ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
ကျွန်တော့ဇာတီက၊ တရုတ်ပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဖူကျဲန့်ပြည်နယ်၊ ဖူကျိုးမြို့ လေ ၊ အရမ်းကိုလှပသာယာတဲ့မြို့လေးပေါ့ဗျာ။ ဒေသထွက်အစားအစာတွေကလည်း၊ နေ့တိုင်းစားရင်
တောင်မရိုးနိုင်ဘူး။ သောတရှင်များလာလည်ရင် အ၀လိုက်ကျွေးမယ်နော်။အော်ကျွန်တော့နာမည်က ကိုလင်းကြည်ဆိုတဲ့အတိုင်း၊ အပြာရောင်ကြည်ကြည်လင်လင် ဆိုရင် သိပ်ကြိုက်တာဗျာ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော် က အားကစားကိုလည်းသိပ်ဝါသနာပါတာ၊ အားကစားတွေထဲမှာ၊ တိုက်ကွမ်ဒိုနဲ့ ဘက်စကက် ဘောကစားတာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။ အဟဲ ကြွားတယ်လို့မထင်နဲ့နော်၊ ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်၊ ကမ္ဘာ့တိုက်ကွမ်ဒိုမဟာမ်ိတ်အဖွဲ့ (W.T.F.)တတိယတန်းအဆင့်ကိုတောင်ရောက်နေပြီဗျာ။ တော်တယ်လို့မချီးကျူးနဲ့နော်၊ (ချီးကျူးခံချင်လို့ရေးထားပြီးတော့လို့လဲမပြောနဲ့နော်)ကျွန်တော်ကြားလိုက်
သလိုပဲ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လို့တစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူးဗျာ။ သိပ်သွားချင်တာပဲ။ အခွင့်အရေးလည်းမကြုံဘူးဖြစ်နေတယ်။ သူများတွေမြန်မာပြည်အကြောင်းပြောရင်၊ ဘေးနားကနေပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့အားကျစွာနားထောင်နေတာ၊ ဘယ်သူလဲလို့ကြည့် လိုက်ရင် ကျွန်တော်လင်းကြည်ပါပဲဗျာ။
 ၂၀၁၇-၆-၂၃ ၂၀၁၇-၆-၂၂ ၂၀၁၇-၆-၂၁ ၂၀၁၇-၆-၂၀More>>
 မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီးမှ နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ပွဲတော် အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းစကား ပြောကြား Happy Chinese New Year စီအာအိုင် အသက် ၇၅ နှစ် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေအပြည့်အစုံသို့>>
More>> © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040